I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Karla
Uma ufuna indawo ekahle yokubaleka yabantu abangu-2, ungabe usabheka okunye. Singathanda ukukwamukela esitudiyo sethu sesimanje nesizimele esitholakala ezingeni eliphansi lekhaya lethu - kodwa esihluke ngokuphelele ekhaya lethu.
Sitholakala kahle, ne-Elizabeth Beach kanye ne-Wallis Lake phakathi nebanga elifushane lokuhamba. I-Shelly, i-Boomerang kanye ne-Blueys beach kungenye nje imizuzu emi-2 yokushayela umgwaqo.
Lesi situdiyo sinomnyango ohlukile, igumbi lokulala elihlukene elilingana nendlovukazi, igumbi lokugezela lesimanje, indawo yokuphumula ehlukene ene-TV enkulu, ukufinyelela emphemeni wakho wangasese omboziwe onetafula lokudlela kanye ne-BBQ endaweni enhle engadini yangasese, kanye nekhishi elihlome ngokuphelele. Kubathandi bekhofi, sinikeza i-coffee plunger kodwa-ke sicela ulethe amabhontshisi akho ekhofi agayiwe noma ungathenga nobhontshisi wekhofi esitolo sendawo.
Konke kusezingeni eliphansi, ngakho-ke azikho izitebhisi ongaqhudelana nazo, ngaphandle kwesinyathelo esisodwa phakathi kwekamelo lokulala negumbi lokuphumula.
Sikunikeza izinsiza zakho eziyisisekelo okuhlanganisa yonke ilineni (njengamashidi, okokulala, amathawula etiye, amathawula okugeza namathawula olwandle), iphepha lasendlini yangasese, insipho, ukugeza umzimba, i-shampoo / okokulungisa, ukomisa izinwele, itiye, ikhofi esheshayo, ushukela, ilitha elingu-1 ubisi nezinye izinto ezahlukahlukene zokuphekela - ukumane sibala ezimbalwa!
Siphinde futhi sinikeze uxhumano lwe-inthanethi lwe-Wi-Fi lwamahhala kanye ne-Netflix.
Sitholakala eduze kakhulu namabhishi angu-4 angcono kakhulu ku-Mid North Coast - i-Elizabeth Beach (egadiwe ehlobo), i-Shelly (izingubo ozikhethela yona), i-Boomerang Beach (igada ehlobo) kanye ne-Blueys Beach. I-Seal Rocks iyimizuzu engama-20 kuphela phansi komgwaqo kanti amabhishi aseForster ayimizuzu eyi-15 ukushayela eNyakatho.
Inqwaba yezindawo zokudlela ezizungeze futhi. Phakathi nebanga elifushane lokuhamba kukhona i-Pacific Palms Recreation Club (eyaziwa nangokuthi i-The Recky) futhi uma usuka kude nje ufika ngedrayivu kukhona ezinye izintandokazi, ezifana ne-'Kembali' kanye ne-'Moby's' kanye nezinye ezimbalwa.
Uma ukudoba kuyinto yakho, sinezinketho eziningi ongakhetha kuzo, kuhlanganise namanzi amahle ahlanzekile e-Wallis Lake.
Uma uzoshada, sikumizuzu embalwa nje ukuya eThe Green Cathedral kanye nokuhamba kancane ukuya ekhaya uma ukwamukela kusePacific Palms Surf Club.
Siqaphela kakhulu ubumfihlo bakho futhi ngenxa yalokho, ngeke sikuphazamise ngesikhathi uhlala. Uma kukhona okudingayo nhlobo, wamukelekile ukuthi ungqongqoze emnyango wethu noma usishayele.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-2007